Tweetbot na 1Password na ire ere maka obere oge | Esi m mac
Tweetbot na 1Password na ire ere maka obere oge
Na mbata nke Christmas, ọtụtụ mmepe na-enye anyị ịrịba ego na ha ngwa, ka otuodila soro anyi mee ekeresimesi, na mgbakwunye na iji eziokwu ahụ bụ na anyị na-ejikarị kaadị ahụ n'aka ma na-anwa ime ka anyị kwenye na mbelata ego ọ na-enye bara uru n'ezie. Tweetbot na 1Password bụ ngwa nke ndị ọrụ Mac ọ bụla kwesịrị ịnwe mgbe niile. Tweetbot bụ onye njikwa kachasị mma iji chịkwaa ihe niile na - eme na gburugburu akaụntụ Twitter anyị na 1Password bụ onye njikwa okwuntughe kachasị mma nke na - arụ ọrụ na ngwa ya maka iPhone na iPad.
Ọnụ ego Tweetbot na-emebu bụ 9,99 euro na Mac App Store, mana ụbọchị ole na ole, anyị amaghị ruo mgbe, anyị nwere ike ịzụta ya naanị euro 6,99. Onye Mmepụta nke Tweetbot adịla anya ahapụla ngwa ahụ, ruo mgbe o mechara kpebie imelite ya na akụkọ El Capitan wetara anyị. Na mgbakwunye, ekele maka mmekọrịta site na Tweet Maker ma ọ bụ iCloud, anyị nwere ike ịga n'ihu na-agụ usoro iheomume anyị na ngwaọrụ anyị n'otu ebe anyị hapụrụ ya na Mac.
Maka akụkụ ya, ngwa iji jikwaa okwuntughe weebụsaịtị anyị niile, kaadị akwụmụgwọ, nọmba akaụntụ ... nwere ọnụahịa nke euro 49,99, mana ime ememme Krismas ma nyekwuo kaadị anyị anyị nwere ike ịzụta ya maka naanị 31,99 euro.
N'ihi ngwa a, ọ gaghị ekwe omume ichefu paswọọdụ ọ bụla, ebe ọ bụ na oge ọ bụla anyị mepụtara onye ọrụ ma ọ bụ nweta weebụsaịtị ọhụụ, ngwa a ga-enye anyị paswọọdụ echedoro ga-echekwa icheta ya oge ọ bụla anyị tinyere weebụsaịtị ahụ, ka anyị wee ghara ibu ya n’isi ma jiri ya na-eme ihe niile, dị ka ọtụtụ ndị na-eme.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Tweetbot na 1Password na ire ere maka obere oge
Ihe ngosi MacBook Pro nke anụ ọhịa 15 dị ọhụrụ?
Egwuregwu ụgbọ ala ọhụrụ ọhụụ 'GRID Autosport' Mac App Store